လောကမှာ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေမို့ လူချင်းတူချင်တူနိုင်ပေမယ့် စိတ်ချင်းမတူကြပါဘူး။ ရုပ်ချင်းသာဆင်ချင်ဆင်မယ် စိတ်ဓာတ်ချင်းကတော့ ရေရှည်မတူူညီနိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်က တစ်ကြိမ်မှာ အတွေးတစ်ခုထဲကိုသာ တွေးနိုင်ပြီး ထိုအတွေးကလည်း ၅စက္ကန့်နဲ့ ၁၀စက္ကန့်ကြားခန့်သာ ကြာပါတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက်ကို လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ရုပ်ချင်းသာဆင်ချင်ဆင်မယ်၊ အတွေးချင်း တူနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။ အတွေးအခေါ်ကလည်း ထိုလူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်။ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီး သူရဲ့တွေးခေါ်ပုံ၊ လူတွေကို ဆက်ဆံပုံက မတူညီတတ်ကြပါဘူး။ အဲဒီလို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံမတူညီတာကြောင့်ကိုပဲ ဘဝအတွက်သင်ခန်းစာတွေက လူအမျိုးမျိုးထံမှ ပြန်လည်သင်ယူတတ်ရင် ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝသင်ခန်းစာကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့မရတတ်ပါဘူး။ နာကျင်စရာတွေနဲ့တွဲပြီးမှ ရလာတတ်တာမျိုးပါ။
ဥပမာ။ သင့်ထံက အသည်းအသန်ငွေလိုလို့ ငွေလာချေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့၊ အကြွေးဆပ်စရာမရှိလို့ သင့်ထံမှာ အသနားခံငွေချေးတဲ့အခါ သင်ကအားနာတာရော၊ သနားတာရောကြောင့် ငွေချေးပေးလိုက်ပေမယ့် အချိန်တန် သင့်ကိုငွေလာမဆပ်တဲ့အပြင် သင့်ထက်သာတဲ့အနေအထိုင်၊ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်၊ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ သူက လူတကာရှေ့မှာ သူဌေးလို နေထိုင်ဟန်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ထဲတမျိုးတော့ဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ တကယ်လည်း သူ့မှာ အကြွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိနေပေမယ့် သူစားလိုက်ရင်၊ ဝတ်လိုက်ရင် brand ကောင်းကောင်းတွေမှ ဝတ်တတ်စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာပြောင်တဲ့လူမျိုးတွေ တကယ်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိုပြန်ပြီး သင်ခန်းစာယူမလဲ။ သင်စိတ်ထဲ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှာမှန်ပေမယ့် ထိုလူ့ဆီက သင်ခန်းစာယူတတ်ရင် ရပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် “ရှိတာလေးနဲ့လှအောင်ဝတ်၊ ရှိတာလေးနဲ့ဝအောင်စားမယ်၊ ရိုးသားစွာ နေထိုင်မယ်၊ အကြွေးကင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာရမယ်” ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ အထက်ကလူမျိုးကိုကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။
အရက်မမူးရင် မိသားစုအတွက်အရမ်းကောင်းပေမယ့် အရက်မူးလာရင် ဇနီးကိုရိုက်ပုတ်တတ်တဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးကို မြင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဝမှာ တစ်နေ့အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်လာခဲ့ရင် အရက်မသောက်မိဖို့ကြိုးစားမယ်လို့တွေးပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးတွေရဲ့ နာကျင်ခံစားမှု၊ သိမ်ငယ်နေတဲ့မျက်နှာလေးတွေမြင်ရင် ကိုယ့်ကလေးကျ မိဘမဲ့မဖြစ်အောင်၊ သိမ်ငယ်စိတ်မဝင်ရအောင် ကိုယ့်အလှည့်ကျ မိဘကောင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားရှင်သန်မယ်လို့ တွေးပြီး သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။
သင့်မိဘတွေအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါ သင်ခံစားရတဲ့နာကျင်မှုမျိုးကိုတွေးပြီး ကိုယ့်သားသမီးအလှည့်ကျ ထိုကဲ့သို့နာကျင်မှုမျိုးမခံစားရအောင်နေထိုင်မယ်လို့ သင်တွေးပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့မိဘကြောင့် သားသမီးတွေဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာကိုမြင်ပြီး သင့်သားသမီးအလှည့်ကျထိုကဲ့သို့မဖြစ်အောင် သင့်ကိုသင်စောင့်ထိန်းမယ်လို့ သင်ခန်းစာမယူနိုင်ဘူးလား။
တကယ်တော့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင့်အတွက် ကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့သူတွေရော၊ ဆိုးကျိုးချည်းပေးလာတဲ့လူတွေကော ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုလူတွေပေးလာသမျှကို သင်မြင်တဲ့အမြင်ကို ပြောင်းပစ်လိုက်ခြင်းက သင့်အတွက် အကောင်းဘက်က အကျိုးရှိသွားစေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက သင့်ကို ဘဝရှင်သန်တတ်စေဖို့ သင်ခန်းစာပေးနေတယ်လို့ သင်မှတ်ယူကြည့်လိုက်ပါ။ အဆိုးထဲက အကောင်းတခုခုတော့ သင်ပြန်ရသွားပါလိမ့်မယ်။
တခါတလေကျရင် ဘဝမှာ ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ။ သင့်မိဘတွေ ကွာရှင်းခြင်းက သင်မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ ချမ်းသာပြီး သင့်ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေထံမှာမှ သားသမီးအဖြစ်မွေးလာမယ်လို့ သင်မရွေးချယ်နိုင်ပါဘူး။ စသဖြင့် သင်မရွေးချယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုသင်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထက်က လိုမျိုး သင့်ရဲ့သူတို့အပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကိုသာ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ခြင်းက သင့်အတွက် အဆိုးထဲက အကောင်းဖြစ်လာဖို့လမ်းစပါပဲ။ အဆိုးကိုသာပိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲနေလို့ ဘာတွေများ ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါ့မလဲ။ “ You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending” ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။ အစကို ပြန်ပြီးပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကနေ စတင်ပြီး အဆုံးထိ ကျွန်တော်တို့လိုချင်သလို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ သင်နဲ့တွေ့ကြုံသမျှ လူတိုင်းက သင့်အပေါ်အကောင်းတွေချည်းပေးချင်မှပေးမှာပါ။ တမင်တကာ သင့်ကိုနာကျင်စေမယ့်သူမျိုး၊ အမှတ်တမဲ့နဲ့ သင့်ကိုနာကျင်စေမယ့်သူမျိုး၊ သင်ကိုကူညီခဲ့ဖူးလို့ သူတို့ကိုပြန်ကူညီဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့သူမျိုး၊ သင်ကကူညီခဲ့တဲ့သူမျိုး၊ သင့်ကို ဘာအကျိုးမှမမျှော်ဘဲ ကူညီခဲ့တဲ့သူမျိုး စသဖြင့် အများကြီးတွေ့ကြုံရမှာပါ။ အဲဒီ့အခါ အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ “ဘဝသင်ခန်းစာအတွက် လူတွေထံက တဆင့် သင်ခန်းစာတွေပြန်ယူနေတယ်” ဆိုတာ သင့်ကိုသင်သတိချပ်ပါ။ သတိပေးပါ။ အဲဒါဆိုရင် သင့်မှာခံနိုင်ရည် ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ “Everything happen forareason. That reason cause change. Sometime it hurts, sometime it’s hard. But in the end, it’s all for the best.” ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ရွတ်ကြည့်ပါ။ အရာအားလုံးဟာ အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပျက်လာတာပါ။ အဲဒီ့အကြောင်းတရားကလည်း သင့်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ နာကျင်ရမယ်၊ တခါတရံမှာ ခက်ခဲလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်မှာတော့ အားလုံးက အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတာပါပဲ။
အဓိကက သင့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်း “အခြားသူတွေအပေါ် သူတို့လိုကောင်းတတ်ဖို့ သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါ” သင့်အပေါ်ဆိုးတဲ့သူတွေကိုလည်း “အခြားသူတွေအပေါ် သူတို့လို မဆိုးဖို့ သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါ။” အဲဒါကြောင့် သင့်ဘဝမှာ သင့်အပေါ်ကောင်းတယ်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးတယ်ဖြစ်စေ ကြုံလာသမျှလူတိုင်းက သင့်ကိုသင်ခန်းစာပေးသွားမယ်ဆိုတာ သင်နားလည်ရင်ရပါပြီ။
ဘဝရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့……